Putin: Dagaalka Waan Joojinayaa Hadii Reer Galbeedku Cadaadis Saaraan Zelensky – Heemaal News Network
Putin: Dagaalka Waan Joojinayaa Hadii Reer Galbeedku Cadaadis Saaraan Zelensky
Madaxweynaha Ruushka, Vladimir Putin, ayaa sheegay in dalalka reer Galbeedka ay awoodaan inay gacan ka gaystaan sidii loo soo afjari lahaa dagaalka, taas oo ku iman karta buu yiri iyagoo cadaadis badan saara madaxweynaha Ukraine, Volodymyr Zelensky, dhanka kalana ay joojiyaan hubka ay ku kaalmaynayaanKyiv.
Hadalkan ayuu Putin ku soo qaaday wadahadalkii ugu horreeyay ee dhanka taleefanka ah oo muddo ku dhaw bil uu la yeesho madaxweynaha Faransiiska, Emmanuel Macron.
Bayaan lagu daabacay barta madaxtooyada Ruushka ayaa lagu sheegay in Putin uu xusay in dalalka xubnaha ka ah Midowga Yurub ay iska indhatiraan “dambiyada dagaal” ee uu aaminsanyahay in ciidammada Ukraine ay galeen, isagoo dhanka kale ku eedeeyay inay madaafiic ku bartilmaameedsadaan xaafadaha la deggan yahay ee gobolka Donbas.
Hasayeeshee waxaa arrintaas gaashaanka u daruuray ciidammada Ukraine.
Dhankiisa Macron ayaa waxa uu ka dalbaday Putin in dagaalka uu joojiyo si dad badan oo rayid ah ay isaga baxaan warshadda Azovstal ee ku taal magaalada Mariupol ee waddanka Ukraine.
Ciidammada Ruushka ayaa duqeyn culus goobtaas la beegtay kaddib markii kooxdii ugu horraysay ee rayid ah halkaas isaga baxeen.
Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in 101 qof ay isaga baxeen Azovstal, kaddib markii ay muddo todobaadyo ah goobtaas ku dhuumanayeen xilli ay xaalado adag halkaas ku muteen.
Dadkaas intooda badan waxaa la geeyay magaalada Zaporizhzhia ee waddanka Ukraine, halka kuwa kalana ay ku hareen Mariupol.
Duqa magaalada ayaa sheegay in 200 oo qof ay weli ku xayıran yihiin Azovstal, iyadoo guutada milateriga ee Ukraine ee halkaas joogta ay sheegtay in laba haween ah oo rayid ah maanta lagu dilay duqeynta Ruushka.
Wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka ayaa waxa ay ku eedaysay ciidammada Ukraine inay ka faa’iidaysteen xabbadjoojintii si ay u galaan goobo ay ka soo weerar tegi karaan.
Dhinaca kale, wasiirka gaashaandhigga ee Slovakia, Jaroslav Nad, ayaa sheegay in shirkadda difaaca ee Konštrukta ee ku takhasustay sameynta hubka, ay ka caawin doonto sameynta iyo dayactirka qalabka milateri ee Ukraine.
Wasiirku waxa uu tilmaamay in shixnadda ugu horraysa ee agabkaasi ay ku jiraan tobannaan gawaarida gaashaaman ah.
Slovakia ayaa hore waxa ay ciidammada Ukraine u siisay batariyaasha hannaanka difaaca ee S-300 oo kaliya.
Dadka faaqida arrimaha Yurub ayaa rumaysan in kaalmahada dalalka dariska la ah Ukraine ee dayactirka agabkeeda milateri ay faa’iido wayn u tahay ciidammada dalkaasi, maadaama warshadaheeda uu Ruushku si joogta ah sawaariikh ula dhaco.
Farmaajo Oo ka Hor-yimid Magacaabis Uu Sameeyey RW Rooble.
Liverpool Oo Iska Xaadirisay Finalka Champions League Markii 10aad
Musharax ka Haryimid Guddiga Doorashada Uu R/W Rooble Shaaciyay.
Heemaall June 20, 2021 June 20, 2021
Doorashooyin Qof Iyo Cod ah Oo Maanta ka Bilowday Deegaannada Puntland.
Heemaall October 25, 2021
Askar Loo Xukumay Kufsi ay Gaysteen
Heemaall December 2, 2021